ကျန်းမာရေး - Bezzia | Bezzia
La salud ၎င်းသည်ဘဝတွင်အရေးအကြီးဆုံးသောနယ်ပယ်ဖြစ်ပြီးယေဘူယျအားဖြင့်၎င်းသည်ကျန်းမာခြင်း၊ မျှတခြင်းသို့မဟုတ်ရောဂါမရှိခြင်းကဲ့သို့သောအခြားသူများနှင့်ဆက်စပ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏အဆိုအရ၎င်းသည်၎င်းကိုပြည့်စုံသောအခြေအနေဟုရည်ညွှန်းသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသုခချမ်းသာ, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လူမှုရေး။
Bezzia တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤခေါင်းစဉ်အတွက်အပိုင်းတစ်ခုကိုအပ်နှံပြီး၊ ၎င်းကဲ့သို့သောအကြောင်းအရာများကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုင်တွယ်သည် ရောဂါများ, ကျန်းမာရန်သို့မဟုတ်ကိုယ်အလေးချိန်ဖို့အကြံပေးချက်များ။ ဤအကြောင်းအရာများနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်သတင်းအချက်အလက်များကိုပေးလိုကြသည်၊ သို့မှသာလူတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ခြင်း၊ ကောင်းစွာစားခြင်း၊
မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုကိုမြှင့်တင်ရန်နည်းလမ်း ၄ ချက်
por တောရက်စ် လွန်ခဲ့တဲ့ 12 horas .
por တောရက်စ် လွန်ခဲ့တဲ့4ရက်ပေါင်း .
premenstrual syndrome ဆိုတာဘာလဲ။
Premenstrual syndrome သည်ရာသီလာစဉ်ဆက်စပ်သောလက္ခဏာများစွာကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဘုံလက္ခဏာများနှင့်ထူးခြားချက်များ ...
ယနေ့လေ့ကျင့်မှုတစ်ခုထက်ပိုသောလေ့ကျင့်ခန်းများ (သို့) ဆန့်ထုတ်ခြင်းများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သယ်ဆောင်သွားလိမ့်မည်။
အကောင်းတစ် ဦး ကိုလျှော့ချအနှိပ်ခြေလှမ်းအားဖြင့်မည်သို့လုပ်ရမည်နည်း
Bulimia နှင့် Anorexia ၏ Sequelae